Andro manerantany momba ny tontolo iainana: manome vahaolana ny Emirates Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Andro manerantany momba ny tontolo iainana: manome vahaolana ny Emirates Airlines
Jona 4, 2017
Amin'ny fotoana iraisan'ny Andro Iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, Emirates dia mampiseho teknika fanadiovana fiaramanidina sariaka tontolo iainana izay nahatonga ny zotram-piaramanidina hamonjy rano an-tapitrisany litatra isan-taona. Emirates dia mampiasa ny teknikan'ny 'air drywash' hanadiovana ny fiaramanidiny. Araka ny nanondroana ny anarana, kely na tsy misy rano tafiditra amin'ny fanadiovana ny fiaramanidina, izay mifanohitra amin'ny fomba mahazatra fanadiovana fiaramanidina izay matetika mampiasa rano an'arivony litatra isaky ny fanasana.
Mandritra ny sidina rehetra dia manangona vovoka sy fotaka amin'ny habakabaka ivelany ny fiaramanidina. Ankoatry ny fanaovana ny fiaramanidina ho maloto ary tsy dia mahasarika loatra, ny loto manangona eo amin'ny sehatry ny fiaramanidina koa dia mampitombo ny lasantsy laniny amin'ny fanaovana ny fiaramanidina mavesatra kokoa sy tsy ho aerodynamika. Voadio araka ny fomba nentim-paharazana ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fampiasana rano voahazo pressurized efatra hatramin'ny dimy heny isan-taona. Saingy, amin'ny antsalany, ity teknika ity dia mampiasa rano mihoatra ny 11,300 380 litatra hanadio fiaramanidina Airbus A9,500 iray sy rano mihoatra ny 777 litatra hanadio fiaramanidina Boeing XNUMX isaky ny mandeha.
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2016 dia nampiasa teknika fanamainana fiaramanidina manadio fiaramanidina maherin'ny 250 ny Emirates. Amin'ity teknika ity, ny vokatra fanadiovana ranoka dia ampiharina amin'ny tanana amin'ny sehatra ivelany manontolo amin'ny fiaramanidina. Ny lamba mikrofibre madio dia avy eo ampiasaina mba hanesorana ireo vokatra fanadiovana izay nalaina tamin'ny sarimihetsika, nesorina ny loto niaraka taminy ary navela ho madio sy voadio ny fiaramanidina. Ny fiaramanidina dia tavela miaraka amin'ny sarimihetsika miaro tsara izay mamela ny ambonin-doko hitazona gloss sy hamirapiratra lava kokoa. Mila mpiasa 15 eo ho eo ny mpiasa 12 eo ho eo vao manadio A380 ary 9 ora eo ho eo vao manadio fiaramanidina Boeing 777.
Mijere video an'ny Emirates Airbus A380 manaraka ny fanasan-damba ao amin'ny hangarin'i Emirates Engineering any Dubai.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana ny teknikan'ny drywash. Ny voalohany dia tsy dia misy rano intsony hanadiovana ny fiaramanidina. Rehefa natambatra tamin'ny fiaramanidin'ny fiaramanidina 260 izy dia namonjy rano 11 tapitrisa litatra isan-taona i Emirates. Ankoatr'izay, ny teknikan'ny fanasana fiaramanidina tsy misy rano dia miantoka fa ny fiaramanidina dia mijanona ho madio kokoa mandritra ny fotoana lava kokoa ka mampihena ny isan'ny fotoana tokony hosasana hatramin'ny telo heny isan-taona ny fiaramanidina, ary koa mampihena ny fanjifana solika an'habakabaka noho ny tsy fanangonan'ny loto. .
Amin'ny fomba fiasa, azo atao ny manao asa fikojakojana hafa amin'ny fiaramanidina mandritra ny fanasana maina izay tsy azo atao rehefa sasana amin'ny rano ny fiaramanidina noho ny fahatsapana fa misy fitaovana amin'ny rano.
Emirates dia tapa-kevitra ny ho zotram-piaramanidina tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ary miasa amin'ny iray amin'ireo fiaramanidina fiaramanidina tanora indrindra sy mahomby indrindra eto an-tany. Ankoatry ny fanasan-damba fanasan-damba ho an'ny fiaramanidiny, ny orinasa fiaramanidina dia nanangana hetsika fahombiazan'ny angovo hafa manerana ny asany.
Injeniera sy fikojakojana
Emirates dia mampiasa teknika fanasan-damba vaovao hanadiovana ny motera fiaramanidina izay ahafahan'ny zotram-piaramanidina mamonjy famoahana gazy karbonika 200 taonina isan-taona manerana ny sambo. Hetsika hafa dia misy ny fametrahana andiana voltaika sary iray megawatt ao amin'ny fanjakan'ny kanto Emirates Engine Maintenance Center ao Dubai. Ireo takela-by dia mamokatra herinaratra mihoatra ny 1,800 megawatt-ora isan-taona, manampy amin'ny famonjen'ny 800 taonina amin'ny famoahana gazy karbonika. Ny Emirates Engineering dia nametraka jiro LED mamonjy herinaratra nateraky ny sensor mihetsika mampihena be ny fanjifana herinaratra.
Emirates dia nanolotra lamba firakotra maharitra vita amin'ny tavoahangy plastika vita amin'ny 100%. Amin'ny fampiasana teknolojia ecoTHREAD ™ misy patanty, ny lamba firakotra tsirairay dia vita amin'ny tavoahangy plastika 28 voaverina. Tombanana fa tamin'ny faran'ny taona 2019, Emirates ecoTHREAD ™ lamba firakotra dia namonjy tavoahangy plastika 88 tapitrisa tamin'ny fanariam-pako.
Amin'ny alàlan'ny programa 'A Greener Tomorrow' dia nanome famatsiam-bola ho an'ireo fikambanana tsy mitady tombom-barotra eran'izao tontolo izao i Emirates izay miasa mba hitehirizana sy hiarovana ny tontolo manodidina azy ireo. Ny vola ho an'ny fandraisana andraikitra dia voaangona amin'ny alàlan'ny programa fanodinana anatiny ao amin'ny vondrona Emirates.